Shiinaha warshad xambaarsan suunka qalooca iyo soo saarayaasha | Yuantuo
Wareejinta suunka qalooca waa nooc ka mid ah qalabka gudbinta oo leh awood gaarsiin ballaaran, kharash yar oo hawlgal iyo kala duwanaansho ballaaran oo dalab ah. Marka loo eego qaab dhismeedka taageerada, waxaa jira laba nooc: nooca go'an iyo nooca wareega; sida ku xusan qalabka gudbinta, waxaa jira suun, suun caag ah iyo suunka birta. Heerkulka bay'ada shaqada ee rarka sidey guud ahaan waa inta udhaxeysa - 10 ℃ iyo + 40 ℃, heerkulka maaddaduna waa inuusan ka badnaan 70 ℃; suunka caagga ah ee kuleylka u adkaysta ayaa qaadi kara hi ...
Wareejinta suunka qalooca waa nooc ka mid ah qalabka gudbinta oo leh awood gaarsiin ballaaran, kharash yar oo hawlgal iyo kala duwanaansho ballaaran oo dalab ah. Marka loo eego qaab dhismeedka taageerada, waxaa jira laba nooc: nooca go'an iyo nooca wareega; sida ku xusan qalabka gudbinta, waxaa jira suun, suun caag ah iyo suunka birta. Heerkulka bay'ada shaqada ee rarka sidey guud ahaan waa inta udhaxeysa - 10 ℃ iyo + 40 ℃, heerkulka maaddaduna waa inuusan ka badnaan 70 ℃; suunka caagga ah ee u adkeysanaya kuleylka ayaa qaadi kara qalabka heerkulka sare ee ka hooseeya 120 ℃. Kuma haboona in la isticmaalo qalabka xambaara suunka marka heerkulka maaddadu uu sareeyo. Markaad u gudbineyso walxaha leh aashitada iyo walxaha saliida alkaline iyo dareeraha dabiiciga ah, caag ama suumanka caaga ah ee u adkaysta saliida iyo aashitada iyo alkali waa in la isticmaalaa. Waxaa jira lix nooc oo xambaarayaasha suunka: 500, 650, 800, 1000, 1200 iyo 1400mm. Marka loo eego dhererka gaarsiinta, nooca maaddada, awoodda, gaarsiinta awoodda, dhererka gaarsiinta iyo arrimo kale oo xambaarsan suunka, isticmaalaha ayaa go'aan ka gaari kara qaabka wareejinta iyo ballaca suunka la xushay, lakabyada shiraaca iyo dhumucda suunka xisaabinta.
Wareejiyaha suunka waxaa si weyn loogu isticmaalaa metallurgy, macdanta, dhuxusha, dekedda, gaadiidka, biyaha iyo korontada, warshadaha kiimikada iyo waaxaha kale ee rarka, rarka, wareejinta ama dhajinta qalabka kala duwan ee dabacsan oo leh cufnaanta 500 ~ 2500kg / m3 heerkulka caadiga ah. Wareejiyaha suunka wuxuu leeyahay faa'iidooyinka awoodda gudbinta ballaaran, qaab-dhismeedka fudud, dayactirka habboon, qiimaha hooseeya iyo kala duwanaanta xoogga leh. Suunka xambaarsan suunka wuxuu ka kooban yahay hal ama dhowr unug oo nidaamka gaadiidka lagu raro qalabka. Marka loo eego shuruudaha geeddi-socodka, waxaa loo qaabeyn karaa qaab jiifsan ama qaab jaan-go'an ah. Marka lagu daro buuxinta shuruudaha gudbinta jiifka ama foorara, qaadista suunka sidoo kale waxaa lagu dari karaa qaybta qaansada ee qulqulka, qaybta qalooca isku xirnaanta iyo qaybta toosan Cabbirka baaxadda ee walxaha loo oggol yahay in lagu qaado xamuulka suunka badanaa waxay kuxirantahay ballaca suunka, suunka xawaaraha, xagal jeexdin iyo xagal qallooca, waxayna sidoo kale kuxirantahay inta jeer ee alaabada waaweyn. Waqtigan xaadirka ah, heerkulka deegaanka shaqada ee xambaaraha suunka waa guud ahaan - 25 ～ + 40 ℃. Intaas waxaa sii dheer, shirkadeena waxay kaloo soo saartaa gawaarida suunka khafiifka ah, gudbiyaha suunka go'an, gawaarida silsiladda, gawaarida la dhaqaajin karo iyo qalabka kale ee ujeedada gaarka ah u gudbinaya.
Hore: wareejinta qalooca
Xiga: rar qalooca
Suunka Wareejinta Madaarka
Wareegtada Suunka Wareejinta
Wareejiyaha Suunka Flat
Suunka Wareejinta Mini
Wareejinta Suunka Qaaska ah
Suunka gudbinta mesh
O suunka gudbiyaha